Indawo encinci ekuthiwa yiQuarry ilala abantu abayi-4 uthe zava! - I-Airbnb
Indawo encinci ekuthiwa yiQuarry ilala abantu abayi-4 uthe zava!
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMike & Kate
UMike & Kate yi-Superhost
Siphila kwiihektare eziyi-10, iihektare eziyi-4 ukuya kweziyi-5 ngamanzi. Intwasahlobo entle i-Quarry. Ungenza i-kayak, iphenyane lokutyibiliza emanzini, ukuqubha, intlanzi uze uphumle nje kumgangatho omhle.
NgoJanuwari 2020 savula iGolf Simulator eQuarry. Iindwendwe ziyakwazi ukuyibhukisha ngokusifowunela ngqo. Amaxabiso akhethekileyo ayasebenza xa uhlala kwenye yezindlu zethu ezincinci. Qesha ipali yokuloba nge- $ 10 ngosuku.
Ngenxa yokuba indawo incinci sicela ukuba kubekho iindwendwe ezine kuphela. Iindwendwe eziyi-2 zokuqala ziqukiwe kwixabiso kwaye undwendwe yi-3-4 $ 30 ngomntu ngamnye ngosuku. Ukuba kufuneka ube nexabiso elingaphezu kwe-4 linyuka kakhulu nge- $ 60 umntu ngamnye ngosuku. Sikhuthaza ukuba kungabikho zindwendwe zingaphezu kweziyi-4!
Ekubeni sihlala kwizindlu zephondo singasondelelani. Nangona kunjalo, enye yezona ndawo zintle nezintsha kukuya ngaphaya kwendlela ukusuka kuthi.
Umbuki zindwendwe ngu- Mike & Kate
Sidla ngokufumaneka ibe siyakuthanda ukudibana nondwendwe lwethu. Nangona kunjalo, silushiyela undwendwe ukuba ufuna izinto eziyimfihlo ezingakanani.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rolla